Armenia oo gudaha aqalladooda ku xusay 105 sano guuradii ka soo wareegatay xasuuqii Turkigu u geystay
Mogadishu - 01:58:53
Friday April 24, 2020 - 21:37:35 in Wararka by Super Admin
Shacabka waddanka Armnia ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxa ay u xuseen sanad guuradii 105-aad ee ka soo wareegatay xasuuqa ay ku calaamadeeyeen boqortooyadii Cismaaniyiinta Turkiga sanadkii 1915-kii.
Aqallada ayay dadku ku xuseen sanad guuradan iyagoo shumacyo, nalal iyo tooshashka moobeelladooda shidaya, maadaama lagu jiro bandoowga coronavirus isla markaana la mamnuucay isu soo baxyada dadweynaha.
Tirada dadkii Turkigu ay dileen ayaa weli muran ka taagan yahay, waxaana Armenia ay u aqoonsan tahay illaa 1.5 milyan oo dadka ka soo jeeda Armanka kuwaas oo la isugu daray xabsi iyo xasuuq dagaalkii 1-aad ee dunida, balse Turkiga ayaa tiradaasi weligiiba diiddanaa, isagoo ku eedeeyay dowladaha Turkiga neceb in ay tiradaasi sameeyeen.
Dadkani la dilay ayaa taariikhda lagu xusay in dilkoodu ka dhacay Constantinople oo haatan loo yaqaan Istanbul illaa Angora oo iyana haatan loo yaqaanno Ankara, waxaana Armenia ay sheegaan in dadkaasi loo laayay naceyb loo qabo iyo in la doonayay in dhulkaa laga sifeeyo.
Turkigu ma dafirsana in dadkaasi ay gacantiisa ku bexeen, hase yeeshee waxa uu aad uga soo horjeedaa magaca loo adeegsado ee ah (xasuuq ula kac ah).